Ukutshiza iNqaba, ukupholisa inqaba, ukukhupha umoya okhupha umoya kwiFan-Lvran
Sinikezela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu.
Imveliso ephambili ejolise kuyo
Isiqinisekiso semveliso yokonga umbane ye-CQC Uvavanyo lwe fan luhambelana nomgangatho kazwelonke we-GB19761-2009. Izixhobo zomqhubi zinokuqhuba ngokuqhubekayo iiyure ezingama-24 ngaphandle komonakalo, inobomi benkonzo ende, ukugcina amandla kunye nokusebenza ngokufanelekileyo, kwaye iyunithi yonke iphantsi koxinzelelo lwekhompyuter kunye nohlalutyo lobunzima ukuphucula ukomelela kwesakhiwo. Umsebenzi olula wolondolozo Ukusetyenziswa kwebhafu yeoyile evaliweyo itanki yeoyile ikhusela iibheringi kunye nesiseko seshafti kwirhasi etshabalalisayo, kwandisa ubomi benkonzo, ...
Ammonia Absorption Ukurhabaxa kweNkunkuma yoShishino
Umzi mveliso we-PE Wet Scrubber oManzi we-Acid Mist Purification Equipment: Ukunyanga iigesi ezonakalisayo (ezinjengeasidi, iarhasi yenkunkuma yegesi), ukhetho lwezixhobo zokucoca sisitshixo sokusebenzisa ulwelo ukufunxa irhasi yenkunkuma. Okwangoku, inkampani yethu ngokuzimeleyo iphuhlise i-asidi kunye ne-alkaline inkqubo yokuhlanjululwa kwegesi kunye nezixhobo ezinokucoca okuphezulu, ukusebenza okulula kunye nolawulo, kunye nobomi benkonzo ende. Ubugcisa kunye nemveliso inesakhiwo esilula, ...
Anticorrosion lobushushu elisezantsi ukumelana emanzi Sc ...
Njengoko irhasi yokukhupha kunye nokuhla kwe-absorbent kunxibelelana rhoqo kwindawo yokupakisha, uxinizelelo lwesinyibilikisi ekunyukeni komoya kuya ngokuhla, kwaye xa ifikelela encotsheni yenqaba, ifikelele kwiimfuno zokufunxa kwaye ikhutshiwe ngaphandle kwenqaba. Ngokuchasene noko, uxinzelelo lwento ephakathi kulwelo oluhlayo luya ngokuya luphakama, kwaye iimeko zenkqubo ziyafezekiswa xa zifikelela emazantsi enqaba, kwaye ikhutshiwe ...
Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Ukukhupha iFan, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan, Ifeni yecandelo leCentrifugal, Fume Isitshisi,